Ungayiqeda Kanjani Leyo ndaba ye-Pesky -2 ngama-WordPress Slugs | Martech Zone
ULwesihlanu, February 6, 2015 ULwesihlanu, February 6, 2015 Douglas Karr
Ngiyethemba ukuthi akusimina ngedwa okukhathaza lokhu, kepha ngiyakuzonda impela lapho ngifaka isigaba kubhulogi le-WordPress futhi i-URL iphenduka into efana nale / isigaba-2 /.
Kungani i-WordPress Yengeza i--2?
Omaki bakho, izigaba, amakhasi nokuthunyelwe kwakho konke kune- slug lokho kuchazwa etafuleni elilodwa lapho ungeke ube nezimpinda eziphakathi kwalezi zindawo ezintathu. Okwenzeka kakhulu ukuthi unekhasi, okuthunyelwe noma umaki one-slug ngakho-ke awukwazi ukuwusebenzisa njenge-slug yesigaba. Esikhundleni sokukutshela lokho, i-WordPress imane izinombolo ze-slug nge -2. Uma ukwenzile futhi, bekuzokwengeza -3, njalonjalo. Ama-Slugs kufanele ahluke kulo lonke uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe.
Nasi isithombe-skrini senkinga nelinye lamakhasimende ethu.
Ngikulungisa Kanjani -2?
Okokuqala, uzodinga ukusesha amakhasi, okuthunyelwe, namathegi wegama le-slug ofuna ukuba nalo. Uma usuyitholile, kuzodingeka uhlele lelo khasi, uthumele kanye / noma umaki ukuze uqhamuke ne-slug ehlukile. Kaningi kunalokho, sikubona njengomaki bese sisusa umaki kokuthunyelwe ngakunye. Ukwenza lokhu:
Thayipha igama slug esifuna emkhakheni wokusesha ekhasini lethegi.
Uhlu lokuthunyelwe ithegi esetshenzisiwe kulo seluhlwini.
Ubuningi bokuthunyelwe ithegi esetshenziswa kukho kuboniswa ngakwesokudla kwethegi.
Chofoza kulelo nani futhi uzothola uhlu lwalokho okuthunyelwe ngakunye okusetshenzisiwe kwethegi.
Chofoza Ngicashile kokuthunyelwe ngakunye, susa umaki, bese ugcine okuthunyelwe.
Buyela ekhasini lomaki, sesha umaki, futhi kufanele ubone ukuthi umaki ubhalwe kokuthunyelwe okungu-0.
Uma kungu-0, susa umaki.
Manje umaki usususiwe, usungabuyekeza isigaba slug bese ususa i -2.
Njengoba amakhasi wesigaba sesayithi lakho kungenzeka akhonjiswe emiphumeleni yosesho, uzofuna ukuqondisa kabusha i-URL yakudala nge -2 iye kwi-URL entsha ngaphandle kwayo.
Tags: isigaba slugsusa umakiikhasi slugiposi slugsusa umakiama-slugsithegi slugbuyekeza i-slugWordPress